२३ बैशाख २०७८, बिहीबार ०३:२६ PM
उपाध्यक्ष गौतमलाई अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्ताव होला त कार्यान्वयन ?
५ पुष २०७७, आईतवार १०:५२ मा प्रकाशित
२०७७ पुस ५ आइतबार, काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा विश्वास गर्न नसकिने नेकपाकै नेताहरुले बताएका छन् । उहाँलाई केही महिना अगाडिदेखि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
नेकपा नेता डा भिम रावलले बाहिर बाहिर कस्ले कस्लाई के बनाउने भन्ने कुराको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “विगतका धेरै सहमती कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसैले नयाँ प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन होला भन्ने आधार देखिदैन,” डा. रावलले भन्नुभयो ।
पार्टीमा कुनै जिम्मेबारी दिनका लागि प्रक्रियाहरु तय गरिएको हुने चर्चा गर्दै उहाँले बैठकमा पेश गरेर प्रक्रियाबाट निर्णय गरेमा मात्रै हुनसक्ने बताउनुभयो । बैठकमा पेस नगर्ने तर बाहिर बाहिर भन्दै हिड्नुले पनि बनाउन साच्चिकै चाहेको हो की होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुने नेता रावलको तर्क छ ।
पार्टी कमिटिभन्दा बाहिरबाट पद बाँड्दै हिड्नु अलोकतान्त्रीक र पार्टी पद्धती विपरित भएको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुले अध्यक्ष पद छोड्नै पर्ने भएमा उपाध्यक्ष गौतमलाई दिन तयार रहेको बताएको चर्चा चलिरहेका बेला नेता रावलले विगतमा पनि धेरै आश्वासन र सहमती उहाँले पुरा नगरेको स्मरण गराउनुभयो ।
भोली वा पर्सीमा एसईईको परीक्ष�